Nicole Prause & David Ley သည်ဂယ်ရီ Wilson အားတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှ - Brain On Porn မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည်ဟုပြောဆိုခြင်း
Update ကို (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) - Serial defamer & နှောင့်ယှက်သူ Nicole Pause သည် Gary Wilson အားတရားစွဲဆိုမှုများရှုံးသည်။ 2020 ၏သြဂုတ်လ၌ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်လိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကို SLAPP ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ Prause သည်သူမ၏လိမ်လည်လှသော TRO တစ်လျှောက်လိမ်ညာခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား သူမကိုထောက်ပံ့ရန် ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုများ ငါသူမ၏အညှာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ကြောင်း အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်၏ဆိုက်ဘာအပြေးသမား Dr. Nicole Prauseတစ်ဦးကိုပြင်ဆင် ရေဖျက်မှုဘလော့ဂ်အပိုင်းအစသူမကအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်း website တွင်တင်ထားရာ။ ဒါဟာအပြီးဖယ်ရှားခဲ့သည် ငါဒါကို Tweet လုပ်ခဲ့။ (မူရင်း url: http://mikesouth.com/scumbags/dr-nicole-prause-destroys-yourbrainonporn-dont-fall-22064/) ။
Prause ၏မဖွယ်မရာပြုမှုဘလော့ဂ်အပိုင်းပါ ၀ င်သည့် site သည်သူ့ဟာသူကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသည်။
သူ Mike တောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းဘလော့ဂ်, 1998 ကတည်းကအရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးတည်ရာ။ သူ Mike တောင်ပိုင်းသေးငယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် porn ထုတ်လုပ်သူနှစ်ခု AVN ဆုအနိုင်ရသူကား, အရွယ်ရောက်သတင်းဘလော့ဂ်ရှေ့ဆောင်လှည့်။ တောင်ပိုင်းကအဓိကသတင်းက်ဘ်ဆိုက်များတစ်အိမ်ရှင်အပေါ်ကိုးကားနှင့် Gawker.com "အဖြစ်သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်porn အတင်းအဖျင်းများ gonzo ညျရှငျဘုရငျ"။
Mike South နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းသည် Prause ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများ၏ရှင်းလင်းသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နောက်ထပ်ဥပမာရာပေါင်းများစွာ):
သူမ၏အသေရေဖျက်အပိုင်းအစခုနှစ်, Prause သိလျက်, မဟုတ်မမှန်ကြောင်းဖော်ပြထား
Gary Wilson သည်ဇီဝဗေဒပါမောက္ခဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သူသည်တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပါမောက္ခမဟုတ်ဘဲဘွဲ့ကြိုနည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသည်။ သူကလေးပုံတပုံတောင်မပြီးဆုံးခင်ချက်ချင်းလခမရဘဲအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။
Prause လည်းဒီ posted Quora အပေါ်တူညီတဲ့အသေရေဖျက်ပစ္စည်း"Wilson ကလခမရဘဲအလုပ်ဖြုတ်ခံခဲ့ရသည်" ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည် -
၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် Prause သည် Quora နှင့်တွစ်တာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏တိုင်ကြားမှုများအပေါ်ပြုမူခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုစာရွက်စာတမ်းနှင့် Prause ၏မှားယွင်းသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏တိုင်ကြားချက်အပေါ်ဆောင်ရွက်နေသည့် Quora ၏အတည်ပြုချက် (ကျွန်ုပ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည့်ပထမဆုံးချိုးဖောက်မှုမဟုတ်)
Quora ကငါ့ကိုနှောင့်ယှက်တဲ့အတွက် Nicole Prause ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပင်ထားပါတယ်
Gary Wilson က Prause အား twitter သို့လည်းသတင်းပို့သည်။ တွစ်တာ၏အဖြေ:
Prause ၏ twitter အကောင့်ကိုတစ်ရက်ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှတွဲဖက်နည်းပြတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးပါမောက္ခအဖြစ်တစ်ခါမျှမပြောဆိုခဲ့ဖူးပါ။ - သတိမရှိသောဂျာနယ်လစ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်နှစ်များတစ်လျှောက်သူ့အားမှားယွင်းသောခေါင်းစဉ်များစွာပေးခဲ့သည် - ပင်လယ်ဓားပြများ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်ယခုအသုံးမ ၀ င်သောစာမျက်နှာများ TEDx အတော်များများကစကားပြောသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲဟောပြောသူများကိုသတိမဲ့စွာဖော်ပြခဲ့သည်။ အောက်ပါပုံသည် Prause ရေးသားချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏အထောက်အထားများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြကြောင်း“ သက်သေပြရန်” အတွက်ဖြစ်သည် (Gary Wilson စာမျက်နှာမရှိတော့) မှတ်ချက် - Prause ကသူမရဲ့“ သက်သေ” ကိုမထုတ်မချင်းဒီ site ကိုငါတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ သူ့ရဲ့ host တွေနဲ့လည်းတစ်ခါမှမဆက်သွယ်ဖူးဘူး။ ထို့ကြောင့်ငါက "ဇီဝဗေဒ" သို့မဟုတ် "ပါမောက္ခ" ၏တောင်းဆိုမှုများကိုဘယ်တော့မှမ။ ငါစကားပြောညှိနှိုင်းမှုရှာကြံမနှင့်စကားပြောဘို့အခကြေးငွေလက်ခံဘယ်တော့မှဘူး။ ထို့အပြင် YBOP သည်ကြော်ငြာများလက်ခံခြင်းနှင့်ရရှိသောငွေများကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ ဂယ်ရီ Wilson ၏စာအုပ် မှတ်ပုံတင်ထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသွားပါ။
On စာမျက်နှာ ပတ်သက်. အဆိုပါ Keynotes.org က်ဘ်ဆိုက်ကအေဂျင်စီမဟုတ်ပါဘူးနှင့်မည်သူမဆိုတစ်ဦးကဗီဒီယိုနှင့်စပီကာဇီဝ upload တင်ပေးနိုင်ကြောင်းကို said: Keynotes.org သည်အေဂျင်စီတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ မီဒီယာဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Keynotes.org သည်လူသိများသောရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး TrendHunter.com သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Prause ကသူမလိုချင်သောမှားယွင်းစွာတင်ပြသည့်“ သက်သေ” ကိုဖန်တီးရန် Gary ၏ TEDx ဟောပြောချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမတိကျသောဇီဝဖြင့်တင်ပို့ခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးနောက် စဉ်ဆက်မပြတ်နှောင့်ယှက်၏ 8 နှစ်ပေါင်း နှင့် ဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံ, စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည်းဖြည်းချင်း, ရေဖျက်မှုအခိုင်အမာ, ရာပေါင်းများစွာ၏ tweetsနှင့် username များများစွာ နှင့် မှတ်ချက်များကိုရာပေါင်းများစွာသောဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြသွားလိမ့်မယ်။
ငါတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှာနှစ်ကြိမ်သင်ပေးတယ်။ ဤအပိုဒ်အောက်ရှိအလုပ်ခန့်ထားမှုစာရွက်စာတမ်းများတွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အခါမျှ“ မပစ်ပယ်ထား” ခံခဲ့ရသည်။ ငါသည်လည်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းအခြားကျောင်းအတော်များများတွင်ခန္ဓာဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ရောဂါဗေဒများကိုလည်းသင်ကြားခဲ့ပြီးအော်ရီဂွန်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား (ပညာရေးကဏ္ California) မှပညာရေးဌာနများမှထိုဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားရန်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ကြှနျုပျတို့အကွောငျးစာမျက်နှာ) ။ ငါပါရဂူဘွဲ့ရှိသည်သို့မဟုတ်ပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ဖူးဘူး။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော” မိတ္တူကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်တင်ထားသည့် Prause စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ Prause ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်နုတ်ထွက်ခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်မှထုတ်ပစ်လိုက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ Prause ဗားရှင်းသည်ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်ကျွန်ုပ်နုတ်ထွက်ကြောင်း SOU ကဖော်ပြသော COMMENTS အပိုင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
စကားမစပ်, ဂယ်ရီနေသူ့ရရှိသောအရာဖို့မေတ္တာကိုမခံမလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိ သူ့စာအုပ် သွားပါ။ သုတေသနအရာရှိအဖြစ်သူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုဂုဏ်ထူးဆောင် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်သလိုသူချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အစေခံသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်၎င်း၏ရန်ပုံငွေများ disburses ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါဘူး။
သူကတနေ့ကို TED အဆိုပါဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် unmerited (Prause ဦးဆောင်သော) မိမိဝေဖန်သူများကမိမိအပေါ်ထားရှိရှိသည်ဟုရှည်လျားခက်ခဲစည်းရုံးတိုက်တွန်းကြောင်းသတိပေး အလွန်လူကြိုက်များ TEDx ဟောပြောပွဲ။ The Great Porn Experiment (2012) အတွက်ပြည့်စုံသောပင်ကိုယ်မူလအထောက်အပံ့ရှိရုံသာမကဂယ်ရီ Wilson ၏ပြောဆိုချက်များကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ရာနှင့်ချီသောနောက်ထပ်လေ့လာမှုများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာသည် TGPE အတွက်ဆလိုက်ထောက်ခံမှုဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအလုပ်ခန့်ထားမှုစာရွက်စာတမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွပ်စွဲချက်များကိုညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းခွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းအပြင် Prause သည် Quora နှင့် Twitter ကို အသုံးပြု၍ သူမ၏မုသာစကားကိုပြန့်ပွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင် Prause သည် Quora မှတားမြစ်ခြင်းခံရပြီး Twitter မှရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ “ ချီးမွမ်းစာမျက်နှာ” မှဤအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
မတ်လ ၅ ရက် ၂၀၁၈ - ဂယ်ရီ Wilson အားနှောင့်ယှက်မှုကြောင့် Quora မှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်
မတ်လ 12, 2018 - Prause ရဲ့ Liberos တွစ်တာအကောင့်ကို Twitter စည်းကမ်းများချိုးဖောက်အတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကယ့်ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များပို့စ်တင်ဘို့ကိုဆိုင်းငံ့
Dr. Prause နုတ်ထွက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် သူ့ကိုနှင့်အခြားသူများ libeling နှင့်နှောင့်ယှက်။ ဤအသရေဖျက်မှု၏ဥပမာအသစ် (ကျွန်ုပ်ကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရသည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်း) သည်သူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်မရှိသောတရားရုံးအမိန့်ရှိကြောင်းသူမ၏မကျေမနပ်ပြောဆိုမှုများကဲ့သို့ထိတ်လန့်စရာမရှိသော်လည်း၎င်းသည်တူညီမှုမရှိသလောက်ပင်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကဒေါက်တာ Prause ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်သူမဖြစ်ဟုဆိုသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်ရန်အဘို့အအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
PS: တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ကနီကိုးလ် Prause သည်သူ၏အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်းများဆည်းကပ်သူတစ်ဦးတည်းသာဖွစျကွောငျးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်:
Ley အားဖြင့်နောက်ထပ်သရေဖျက်မှု tweet, (နောက်ပိုင်းတွင်ဖျက်ပစ်ခဲ့) ကိုသူ Mike တောင်ပိုင်းဆောင်းပါးမြှင့်တင်ရန်:
Prause ကသူမ၏အသရေဖျက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အကြိမ်ကြိမ် Tweet လုပ်ခဲ့သည်။ Quora ဆောင်းပါးနှင့်သူမ quora မှတားမြစ်ထားသည့်ဆောင်းပါး - https://www.quora.com/What-do-you-think-about-your-brain- ကိုကြည့်ပါ။ On-porn-movement / answer / Nicole-Prause
Prause စာမျက်နှာ၏ဤအပိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်လိမ်လည်မှုများပြည့်နှက်နေသောနောက်ထပ် tweet - ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Prause မဟုတ်မမှန် Wilson ကမိမိအအထောက်အထားများအတုမူကြောင်းကိုမလုပ်ပဲ
Nikky ၏ quora post နှင့်ကျွန်ုပ်၏ SOU အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်းများကိုချိတ်ဆက်ထားသည့် Prause & Ley ၏ပိုမိုသွက်လက်စွာဖြင့်တွစ်တာများ:
FYI - TED ကို ၅ နှစ်လုံးလုံးအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့တယ်။ သူတို့လက်လျှော့လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် TEDX ဆွေးနွေးချက်မှာပါဝင်တဲ့အရာအားလုံးကအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။ ကြည့်ပါ -
မေလ, 2018: ၀ ီလ်ဆင်သည် SOU မှမောင်းထုတ်ခြင်းခံရသည်ဟုမဟာမိတ်အများအပြားက Prause & Ley နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Tammy Ellis သည်သူမနှင့် The Fight The New မူးယစ်ဆေးဝါးဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် Prause ၏ညှိနှိုင်းထားသောဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူမနှင့်အောက်ပါအချက်များကိုတင်ခဲ့သည် (ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် - မေလ 30, 2018: Prause မဟုတ်မမှန်သိပ္ပံလိမ်လည်မှု FTND စွပ်စွဲဖြင့်, သူသည်နှစ်ကြိမ် FBI ကမှဂယ်ရီအစီရင်ခံခဲ့သည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်):
Tammy Johnson Ellis သည် Wilson အားစွန့်ခွာသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်သည်သာမကသူမသည်“ ချယ်ရီကောက်ယူသည့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ” နှင့်လည်းလိမ်နေသည်။ အားလုံး၌ အသေရေဖျက်ရေးသားချက်များနှင့်တွိရာပေါင်းများစွာ Ley, Prause, Ellis နှင့်သူတို့၏မဟာမိတ်များသည် Wilson ၏“ ချယ်ရီကောက်ယူခြင်း” ဥပမာကိုတစ်ခါမျှတစ်ခါမျှမပြခဲ့ဖူးပါ။ YBOP ၏အဓိကသုတေသနစာမျက်နှာ ) ကိုသုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်သည်။
2019 သို့ဆက်လက်: Prause သည် Wilson အား SOU မှ“ ရပ်စဲလိုက်ပြီ” (သို့) တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ် (တွဲဖက်ဆရာများထံမှ) တွင် TA (သင်ကြားရေးလက်ထောက်) အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်ဟူသောအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုဆက်လက်ရေးသားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူမ Wilson ကသည်သူ၏အထောက်အထားများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြအကြောင်းကိုလိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Obsessed cyberstalker ကထပ်ရိုက်တယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ The Prause မုသား: Wilson သည်ရပ်စဲခြင်းခံရသည်မဟုတ်သလို TA လည်းမဟုတ်ပါ။ (ဤအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်) Wilson သည်သူ၏အထောက်အထားများကိုဘယ်သောအခါမျှအထင်အရှားလွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကြည့်ပါ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Prause မဟုတ်မမှန် Wilson ကမိမိအအထောက်အထားများအတုမူကြောင်းကိုမလုပ်ပဲ.
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရုပ်သိမ်းတောင်းဘူး။ Prause အဆိုပါ MDPI စက္ကူနှင့်ပတ်သက်ပြီးကပြောပါတယ်အရာအားလုံးကိုမုသာဖြစ်ပါသည် - ဤစာမကျြနှာမြားနှငျ့အပေါ်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်: အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ပြီလ ၁ ရက် - Prause နှင့် David Ley တို့သည် Gary Wilson ၏ SOU အလုပ်အကိုင်အကြောင်းထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။
နောက်ခံသမိုင်း: မတ်လ 31, 2016, ထိုတွင် အချိန် အဖုံးပုံပြင် ( "Porn နှင့် Virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု"), Belinda Luscombe အသုံးပြုပုံဂါယူဆပါသည်, နီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Ley, ဂယ်ရီ Wilson က, နှင့်အခြားသော featuring, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာရာတွင်တစ်နှစ်ကြီး အချိန် စာရေးသူနှင့်အခြားခဲ့ အချိန် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏တောင်းဆိုမှုများကို ၀ န်ထမ်းများ (အချက်အလက်စစ်ဆေးသူများ) နောက်ဆက်တွဲ။ တစ်ချိန်ကထုတ်ဝေခဲ့သည် Prause နှင့်သူမ၏ alias“ PornHelps” သည်၎င်း၏စာရေးသူ Belinda Luscombe ကိုရက်စက်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
အခြားသူများက - ဧပြီလ 2016: တစ်ဦးကနီကိုးလ် Prause SOCKS ရုပ်သေးဟာ Belinda Luscombe ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာတည်းဖြတ်မှုပေါင်း
ဧပြီလ 1, 2019 တွင်, ဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Belinda Luscombe နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအပေါ်ထဲမှာအလေးချိန် ရှည်လျားသော twitter ချည် (ယောက်ျားကသာ 45%, အသက် 18-29 သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်တစ်ခုက X-rated ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကွောငျးအခိုင်အမာရာ) အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း၏တရားဝင်မှုဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Prause (ရှည်လျားသောအချိန် Prause မဟာမိတ်ဒါဝိဒ်သည် Ley လည်း Wilson က libeled) Luscombe နှင့် Wilson ကတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်သရေဖျက်မှုဖို့နင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ 8 tweets သူမရဲ့ပထမဦးဆုံး၌, Prause ဤစာမျက်နှာတွင်မှတ်တမ်းတင်တူညီသည်မုသာ repeat ။ သူမလည်းအတုသတင်းစာဆရာ Belinda ခေါ်ဆို, လိမ်လည်မှုပါဝငျ။
Prause သည် Belinda ကိုပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် Ley သည်“ စကားပြေပြန်ခြင်း” သို့ခုန်ချခဲ့သည် (သို့သော် Prause ၏ Belinda အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုချန်လှပ်ထားသည်) Belinda တုံ့ပြန်:
ဒါဝိဒ်သည် Ley နဲ့ပူးပေါင်းမည် သူ့ကိုယ်ပိုင်မုသာ 2: Wilson ကတစ်ဦးက TA (ဆရာလက်ထောက်) ကြီးသူပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်။
အမှန်တရားက Ley (သို့) Prause ကိုသူတို့ဆက်မလုပ်ဖို့တားဆီးမထားဘူး Twitter ကိုသရေဖျက်မှု-ပွဲတော်တွင်, Belinda Luscombe နှင့် Wilson ကတိုက်ခိုက်ခြင်း။
အားလုံး provable သရေဖျက်မှု:
ငါက TA ။ ငါ '' တွဲဖက်ဌာန။ '' (ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားအဖြစ် SOU မတက်ရောက်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် TA မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ )
နှစ်ပေါင်း Prause နှင့် Ley နှစ်ဦးစလုံး, ရဖျက်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့ပျက်ဆီးသတိပေးသို့မဟုတ် porn ရဲ့ပျက်ဆီးသတင်းပို့သုတေသနထုတ်ဝေဘူးသောဆိုက်ဘာအညှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှတက်ပူးပေါင်းပါပွီ။ မကြာသေးမီက Prause နှင့် Ley တစ်ဦးညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ထောက်ခံမှုမှာသူတို့ရဲ့သိက္ခာမဲ့နှင့်မကြာခဏတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဇန်နဝါရီလ 29, 2019 ပေါ် Prause တစ်ဦးတင်သွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်။ ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်, Prause နှင့် Ley ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်စေ့စပ် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com "RealYourBrainOnPorn.com ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်။
2019 ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် David Ley နှင့်လူသိများသော RealYBOP ၏ "ကျွမ်းကျင်သူ" (Justin Lehmiller နှင့် Chris Donaghue) တို့သည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လာကြသည်။ အားလုံး3အပေါ်ဖြစ်ကြသည် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ထောငျခါ၏ လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် SHA များမှာ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်!
2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (Prause ဇန်နဝါရီလ, 2015 ကတည်းကတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ) တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူမလည်းသုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကယခင် UCLA ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးအပါအဝငျအခွားသူမြားပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF).
အခြားသူများကိုနှောင့်ယှက်သူမနိုးနာရီဖြုန်းနေစဉ်, Prause ပါးနစိုက်ပျိုး - သုညသက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူ - တစ်ဒဏ္ဍာရီ သူမက "သားကောင်" ခဲ့ သူမ၏ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုပတျဝနျးကငျြတာဝန်မဲ့အခိုင်အမာသို့မဟုတ် porn သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်နှင့်အတူသဘောမတူဖို့မလျှောက်ဝံ့တဲ့သူအများဆုံးမည်သူမဆို၏။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများတန်ပြန်ရန်, YBOP Prause ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အနိုင်အထက်ခဲ့သည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုစဉ်းစားပါ။ (ဖြည့်စွက်ဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်လွတ်လပ်မှုမှာမဟုတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပါပြီ - ။ Prause ရဲ့သားကောင်များနောက်ထပ်လက်စားချေကိုကွောကျရှံ့ကဲ့သို့)
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုသွယ်ဝိုက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်:စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5.
UPDATE: ချီးမွမ်းမှုကိုယခုအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်.
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #4: နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူ့နှစ်ခုစာအုပ်များ (ရာမဆငျမခွ (ထဲမှာထွက် set?) ဟာစွဲ-deniers '' သဘောတရားလေ့လာမှုများများစွာနှင့်အသစ်များ၏အရေးပါမှုကိုလျစ်လျူရှုအားပေးအားမြှောက်ဘယ်မှာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.
(နိုဝင်ဘာ၊ 2019) နောက်ဆုံးတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။, နှင့်ဤ Prause ရဲ့နှောင့်ယှက် / မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်၏အချိန်ဇယား: VSS ပညာရေးစစ်ပွဲအချိန်ဇယား.
နောက်ဆုံးသတင်းများ (သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀): ဂယ်ရီ Wilson သည်အမှတ်စဉ်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ အသရေဖျက်မှု၊ cyberstalker Nicole Prause အားတရားစွဲဆိုမှုတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အသေးစိတ်များ - Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.